दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको साधारण सेयर बाँडफाँट , कस्ले कति पाए ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको साधारण सेयर बाँडफाँट , कस्ले कति पाए ?
८ भाद्र २०७३, बुधबार १०:१३
काठमाडौं । दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर बाँडफाँट भएको छ । थोरै पाउनेको भागमा दस र बढी पाउनेको भागमा एघार कित्ता परेको छ ।
पचासदेखि ८७० कित्तासम्म आवदेन गर्नेलाई गोलप्रथाको आधारमा दस कित्ता दिइएको छ भने ८७० देखि ९ सय ८० लाई कित्ता आवेदन गर्ने सबैलाई दस कित्ता वितरण गरिएको छ । त्यो भन्दा बढी संख्यामा आवेदन गर्ने सबैलाई एघार कित्ता मात्र दिने निर्णय भएको छ ।
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर असार १३ देखि १६ सम्म बिक्री खुला गरिएको थियो । कम्पनीले एक सय रूपैयाँ अंकित मूल्यमा तीन लाख ९६ हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यसमध्ये कर्मचारीलाई सात हजार नौ सय २० कित्ता छुट्याइएको छ भने सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरूलाई १९ हजार आठ सय कित्ता दिइएको छ ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने यस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर वितरण गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई जम्मा १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो ।
प्रकाशित : ८ भाद्र २०७३, बुधबार १०:१३